Mark Ronson dia miresaka momba ny fifaliana sy ny olana amin'ny famoronana andian-tsarimihetsika 'Watch the Sound' ho an'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny volana aprily lasa teo dia nanambara ny programa i Apple Jereo ny mpamosavy Sound Mark Ronson Tamin'ny alàlan'ny tranofiara iray, nanambara ny orinasan-tserasera Cupertino fa ny andian-dahatsoratra fanadihadiana momba ny teknolojia mozika io.
Na izany aza, hoy ny mpanolotra, ity andiany ity momba ny zava-drehetra izany afa-tsy ny haitao mifantoka amin'ireo karazana fitaovana nateraky ny fandrosoana ara-teknolojia ireo dia nanentana ny mpanakanto ary nanova mozika. Nilaza i Ronson tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Variety fa Apple dia nitady zavatra teknolojia sy geeky tadiavin'ny mpitia mozika ihany koa.
Araka ny nolazain'i Ronson:
Nampifandray ahy tamin'i Morgan Neville izy ireo… ary tiako ny asany. Mpankafy mozika mahafinaritra izy. Mark Monroe dia tao an-tsambo hamokatra, ary tsy tsapako akory hoe firy ny zavatra nampanaovina azy, toy ny 'The Bee Gees': Ahoana no fomba ahazoanao fo maratra. '
Nanomboka niresaka momba ny andian-dahatsoratra rehetra isika rehetra ary tamin'izay no nanapahananay hevitra hizara azy ho enina teknolojia izay ninoanay fa manan-danja indrindra amin'ny fanavaozana ny mozika maoderina, ary ho tompon'andraikitra amin'ireo feo sy hira izay ampahan'ny fianatsika.
Ny andiany dia manomboka amin'ny autotune, ny teknolojia mampiady hevitra izay amboary ny olana am-peo ary mahatonga ny mpihira ho tsara noho izy ireo izany. Mikasika an'io haitao io, Ronson dia nilaza fa:
[Rehefa] Kanye West dia nivoaka niaraka tamin'ny '808s & Heartbreak' tamin'ny 2008, nanova ny fomba fijeriko kely izany satria tsy mody mpihira mihitsy i Kanye, saingy hitany io fitaovana io, ilay autotune, nahafahany namoaka ireo gadona mahavariana izay dia teo an-dohany ary raha tsy izany dia tsy ho vitako izany.
Ny fizarana hafa dia miresaka momba ilay lohahevitra miteraka ady hevitra santionanyHo fanampin'ny fampiasana teknolojia tsy dia miharihary loatra, toy ny fomba nandresen'ny Beatles feo na i Beastie Boys ninia nampiditra fanodinkodinana.
Ronson dia nilaza fa ity andiany ity koa manomezam-boninahitra an'ireo mpisava lalana toa an'i Delia Derbyshireizay ny mozika elektronika tamin'ny taona 60 - anisany ilay hira "Doctor Who" - dia nahazo ny fankasitrahana mendrika azy tato ho ato.
Jereo ny Sound miaraka amin'i Mark Ronson dia andiany enina izay manomboka amin'ny zoma 30 Jolay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mark Ronson momba ny fifaliana sy ny olana amin'ny famoronana andiany 'Jereo ny Feo' ho an'ny Apple TV +
Facebook dia te hampifangaro an'i Oculus amin'ny Apple Health App